Hydrangea petiolate - i-foody lianate shrub emndenini wama-hydrangeaids. Izwe lomdabu lesitshalo yi Southern Kuriles, amaJapane Islands, iSakhalin Island ne- Peninsula yaseKorea. Ukuthungwa kwamahlathi kanye nemililo yehlathi kubangela ukunciphisa ngokushesha inani le-hydrangeas petiolated emvelo, ngakho-ke esifundeni saseSakhalin sibhalwe ohlwini lwe-Red Book.
I-trunk yalesi sivini esivamile sokukhuphuka, efinyelela ububanzi obuyi-8 cm, ikhuphuka emithini ngosizo lwama-sucker emoyeni izimpande ezenziwe ngamahlumela abomvu. Ukukhuphuka kunakho konke ukusekelwa, ngisho nasodongeni olusenyakatho: izimpande-amashukela abambelela kunoma iyiphi indawo. Esikhathini esincane sezulu se-hydrangea petiolate singakhula sibe ngu-15-20 m ukuphakama.
Eminyakeni yokuqala yokuphila, i-liana ikhula kancane, ihlinzeke amandla ekwakheni isistimu yayo . Ngalesi sikhathi, kufanele iboshwe ekusekeleni. Uma utshala, kufanele ukhunjulwe ukuthi i-hydrangea ikhetha ukukhunjulwa okufudumele emoyeni. I-shading ephawulekayo, kodwa ikhula ngokugcwele kuphela ezindaweni ezikhanyisiwe. I-Bloom iqala, ngokuvamile, eminyakeni emihlanu. Izimbali zine-pinkish-white, amaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka, aphezulu-avoid, anesithunzi. Ubusika-obuqinile, kodwa evulekile, umoya obeka isitshalo sishaya, ngakho kufanele utshalwe ezindaweni ezivikelekile.
I-Hortensia petiolate ikhetha inhlabathi evundile evundile. Inhlabathi kufanele ikhetshwe nge-chips, amaqabunga, izinaliti noma amagxolo ukuze umhlaba ugcine umswakama ube ngcono. Kunconywa ukwethula umquba ophilayo emhlabathini futhi izikhathi ezingu-2-3 ngesizini ukukhulula inhlabathi endaweni eseduze. Ukuze kutholakale izimbali eziningi, izihlahla kufanele ziqedwe minyaka yonke ngaphambi kokuqala kwezimila. Ukuvuna okwenziwa njalo entwasahlobo (ngaphambi kokuqhakaza kuhluma) ngeke kube nomthelela ekutheni kube nokuningi, kodwa futhi kuyakudala isikhathi eside. Ngezihlahla ezihlabayo, lesi sitshalo siqhakaza kancane futhi sikhula kabi. Ngo-ekwindla, ama-inflorescences avuliwe ahlukanisiwe.
I-Hydrangea petiolate i-Miranda Unokungalingani Umngcele ophuzi ophuzi ohlangothini lwamacembe. Ikhula kahle kakhulu enhlabathini evundile, enomanzi, emthunzini omnyama. Elanga elikhanyayo, amaqabunga angashisa. Ngokuvame ukukhula emthunzini ogcwele, kodwa ayiqhakazi. Uma lesi sitshalo singanikeli ukusekela, siphumelela phansi futhi singasebenza njengesitshalo esihle somhlabathi. Kulesi simo, lesi sitshalo sibheka kangcono kakhulu kunesigxili. Eminyakeni yokuqala, ukwandisa uhlelo lwempande, uMiranda ukhula kancane. Izinhlobonhlobo nazo zibonakala ngezimbali ezincane kunezinye izinhlobo.
Hortensia oaky - isikhukhula sokuhlobisa esingaba ngamamitha amabili, sinamaqabunga, amaqabunga amakhulu, afana ne-oki. Ekwindla, amaqabunga aqoshiwe ezinhlobonhlobo ezibomvu-zethusi noma ezibomvu nezigubundy. Izimbali ezivela ehlobo, i-inflorescence ihle kakhulu, izimbali zimhlophe, ziqoqwe ezincane ze-cone-like inflorescences kuze kufike ku-10-20 cm ubude. Uma umhlophe ucacisiwe, uba mbala. I-hydrangea engcono kakhulu isitshalo esiyi-oaky esakhiwe ezindaweni ezingaphansi kwamatshe. Ikhula ngokushesha, ihluke ngokubaluleka kokwakheka kanye nesilinganiso sokugcoba kwenhlabathi. Ebusika, engxenyeni yaseYurophu yaseRussia, ngezinye izikhathi kukhululeka.
Ama-hydrangeas ekukhuleni okusebenzayo adinga ukuchelela njalo (kanye ngesonto) nokufaka umquba. Umanyolo ogcwele amaminerali usetshenziswa entwasahlobo, lapho amaqabunga eqhakaza. Ukondla okwesibili kwenziwa ngokubonakala kwefihlekile. Izinhlobo eziningi zezitshalo azidingi indawo yokuhlala yasebusika. Ukutshala izihlahla kwenziwa ekuqaleni kwentwasahlobo: susa amagatsha abuthakathaka futhi abagulayo futhi unciphise amahlumela ukuze unike umqhele isimo esifisa. Phakamisa isitshalo ngezingqimba, ukusika okwehlaza kanye nokuhlukaniswa kwamahlathi.
Izitshalo zisetshenziselwa ukuxuba, ukutshala okukodwa noma kweqembu. Hydrangea petiolate Kuyafaneleka ukulima okuqondile futhi kubalwa njenge-liana, ekwazi ukuhlobisa izicingo, izibonda nezakhiwo, ukukhuphuka izindonga zazo. Ngesinye isikhathi ikhulile ngesimo sekhava lesisemhlabathini bese sakha amaphepheni amahle amnandi.
Umswakama wesitshalo uma uboniswa esikhumbeni ungabangela ukucasuka, futhi ungene emzimbeni - ukugula okulula kokugaya, ngakho-ke uma usebenza nama-hydrangeas, kufanele uqaphele.
Ukuminyanisa Isiqophi: Ukubukezwa Izinhlelo
Iqhaza labesimame ngokuphila kwamadoda. Umama. owesifazane engiyithandayo. Umkakhe nendodakazi
Ngohlobo Lomuntu Okufanele Ube zemali ezingavamile - 2 euro esiyisikhumbuzo
UColonel Baranets Viktor: Biography, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Okungenalutho wenza kusuka apula
Ukwelapha izindawo Aloe